पान र भ्याटको दबाब : त्रासैत्रासमा व्यापारी र उपभोक्ता – Chitwan Post
पान र भ्याटको दबाब : त्रासैत्रासमा व्यापारी र उपभोक्ता
यतिखेर पान र भ्याटको कुरा जताततै सुन्न पाइन्छ । चाहे चिया पसलमा होस् वा होटलमा । चाहे बाटोमा हिँड्दा होस् वा बसमा हुइँकिँदा । शिक्षकलाई भेट्दा होस् वा कुनै अन्य कर्मचारीहरुलाई । कुरा त एउटै खालेमात्रै सुनिन्छ । चाहे कुनै पसलमा होस् वा कुनै कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा जाँदा, जहाँ पनि यतिखेरको बहस, कुराकानी, दुखेसो वा गुनासो भनेकै पान र भ्याटको छ । पान नलिएकाले पान लिने र भ्याटमा जानुपर्नेवालाहरुले भ्याटमा जानुपर्ने भयो भन्ने गुनासो छ । पानसम्म त आफूले लिएकै हो । तर, भ्याटको विषयमा भने आफूलाई केही थाहा छैन । थाहा नहुदानहुँदै पनि भ्याटमा जानुपर्ने जस्तो छ । मैले भेटेका र सुनेका यतिखेरका थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी, कर्मचारी र अन्य थुप्रै वित्तीय कारोबार गर्नेहरुको गुनासो यस्तै यस्तै थिए र छ पनि ।
घरीघरी झलझल सम्झन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले व्यापारीहरुलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन खोज्दा कम्ता सास्ती त खप्नु परेको थिएन । त्यतिखेर पनि आमव्यापारीहरु एकजुट भएर सरकारले ल्याउन लागेको भ्याटको विरूद्धमा चर्काे नारा लगाउँदै जुलुस निकालेका थिए । त्यतिमात्र कहाँ हो र ! व्यापारीहरु बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी र नाकाबन्दीजस्तो कार्यमा पनि उत्रेका थिए । अन्ततः सरकारले आफ्नो अडानमा केही लचिलो हुँदै, व्यापारीहरुसँग वार्ता गर्दै, सम्झौता गर्दै क्रमशः उसको लक्ष पूरा गराएरै छाड्यो । अहिले पनि भ्याट र पानजस्ता औजारहरुको प्रयोग गरेरमात्रै समग्र व्यापारको चुहावटमा नियन्त्रण गर्न नसकिने अड्कल गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले मालवस्तु तथा ढुवानीका साधन अनुगमन प्रणाली गत श्रावण १ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो प्रणाली व्यापार जगत्मा वैज्ञानिक र अत्याधुनिक पक्कै पनि होला, तर यसका विविध समस्याहरु नेपालजस्तो सञ्चारमाध्यमहरुमा वयस्क भई नसकेको देशहरुका लागि केही कठिनाइ अवश्य पनि छ । भन्न त भनिएको छ, कुनै व्यापारीको सामान लोड भएदेखि अनलोड नहुँदासम्म नेटको प्रयोग गरेर घरैमा बसी–बसी आफ्नो सामानको हालत देख्न वा अनुगमन गर्न सकिन्छ । सुन्दा रमाइलो र बडो कौतुहल पनि लाग्ने यो प्रणालीमाथि हामी कति अभ्यस्त छौँ त ? अनि, सबै ठाउँमा यो उपलब्ध पनि छ त ? कि त सरकारले आमव्यापारीहरुलाई यसबारेमा केही गर्दैछ कि ? यसबारेमा मेरो जस्तै सायद् अरुको पनि जिज्ञासा अवश्य होला नै ।
करोडौँको कारोबार गर्नेले कर्मचारी राखेर आफ्नो व्यापार चुस्तदुरूस्त राख्नलाई अडिट गर्नुपर्छ । सामान किन्दा भ्याट बिल अनिवार्य लिनुपर्छ वा दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि सुन्दामा जति चकलेटी छ, त्यो त्यति सहज छैन । सामान बेच्ने साहूजीलाई सर्वप्रथम त कुन वस्तुमा भ्याट लाग्छ वा लाग्दैन थाहा हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सामान खरिद गर्नेवालाले पनि कस्तो खाले वस्तु किनिरहेको छु भन्ने थाहा हुन जरूरी छ । यसबारेमा सम्बन्धित निकायले पनि तदारूकता देखाउनुपर्छ नै । सरकारले लागू गर्न लागेको नियमलाई जबर्जस्ती लाद्नुभन्दा व्यापारीको समर्थन जुटाएर लागू गरेको कार्यक्रम पक्कै पनि दिगो हुन्छ । व्यापार गर्न चाहने महानुभावहरुले व्यापार गर्न चाहने तर राम्रोसँग गर्न नजान्दा सीधा खाले व्यापारीहरु अनायास भड्खालोमा पर्न सक्छन् । उनीहरुको दिनरातको मेहनत र इमानदारिता समाप्त हुनसक्छ । त्यसैले, सम्बन्धित विभागले पनि यस प्रकारको अवस्था नआओस् र इमानदार व्यापारीहरु कुनै हालतमा पनि नफसून् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
यतिखेर प्रायःजसो सर्वसाधारण व्यापारीहरुको पनि मनभरि त्रासको वातावरण छाएको छ । ठूला व्यापारीहरुलाई ठूलैको त्रास छ भने सानालई सानैको छ । साना व्यापारी भन्नाले गाउँमा चारवटा साबुन, दसवटा चाउचाउ, दुई प्याकेट सिग्रेट, तीन पोका भुजा, दस पोका नुन, केही सलाईका बट्टाहरु र एक–दुई दर्जन कापी तथा एक–दुईवटा कलमका प्याक राख्ने व्यापारीहरु हुन् । तिनीहरु पनि हतास, निराश र चिन्तित देखिन्छन् । उनीहरुको चिन्ता भनेको लौ पान नलिने हो भने त दोकान गर्नै पाइँदैन रे, सामान किन्न पनि पाइँदैन रे भन्ने छ । के पान नलिनेले सामान किन्नै नपाइने हो त ? अनि, वर्षमा केवल दस हजारको आम्दानी गर्नेले कस्तो पान लिनुपर्ने हो ? सबैले लिने पान एउटै खाले हो कि पानको पनि रङ र विविधता छ ? अनि, पान कहाँ पाइन्छ ? स्थानीय सरकारले ‘हामी नै राजा हौँ, हामी नै सिंहदरबार हौँ, हाम्रो नियम कानुनले नगरवासीहरु चल्नुपर्ने हुन्छ’ भनिरहेको बेलामा के त्यो लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने हो ?
पान नम्बर लिनका लागि घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सुनिन्छ । घरेलुमा दर्ता हुन जाने सिलसिलामा आफूले गर्ने कारोबारको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ कि ? ‘किराना पसल’ भन्नुपर्ने ठाउँमा ‘स्टोर्स’ भयो भने अर्काे झन्झट व्यहोर्नपर्ने हुन्छ भन्ने पनि सुनियो । ‘स्टोर्स’ भन्नाले भण्डारणसँग मिल्न गई करले बढी टोकसो गर्छ रे भन्ने कुरा के हो ? वास्तवमा यस विययमा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीले अथ्र्याइदिन सके दुवैपक्षबाट थप शङ्काको वातावरण पैदा हुँदैन थियो होला !
अब रह्यो बिल काट्ने कुरो । एक हजारको वस्तु बिक्री गर्दा पनि बिल लिनेदिने गर्नुपर्छ भनेको कसलाई हो ? भ्याटवालाहरुलाई हो कि पानवालाहरुलाई पनि हो ? विद्यार्थीले एक दर्जन कापी किन्दा वा सर्वसाधारणले पानीको जारसेट किन्दा पनि बिल काट्नुपर्ने हो कि कसो ? हजार नपु¥याई नपु¥याई दस हजारको सामान सकियो भने त्यसको खर्च कसरी देखाउने ? खुद्रा व्यापारीले थोक बिक्रेतासँग खरिद गरेर ल्याएको सामानबाटै उसको समग्र मूल्याङ्कन हुने भए खुद्रा सामान बिक्री गर्नेवालाले बिल काट्यो वा काटेन त्यसको लेखाजोखा किन ? सरकारको चासो बिल काट्यो वा काटेनसँग हो कि उसले सामान चर्काे मूल्यमा बेच्योसँग हो ? बुझ्न सकिएन ।
आफूलाई आवश्यक परेको वस्तु भेटियो । वस्तुको पहिचान गरियो । मोलमाल भयो । चित्त बुझ्यो । आफूले सो वस्तु किनियो । ब्यागमा राखियो । हिँडियो । यसमा बिल किन ? त्यसरी नै थुप्रै बेर लगाएर बार्गेनिङ गरी–गरी एक जोर जुत्ता किनियो । लगाइयो । हिँडियो । बस् काम समाप्त । एक ट्रक सामान किनेको त होइन । कुनै घर निर्माणका लागि सामान किनेर ट्रयाक्टरमा राखेर वसारपसार गरेको त होइन । अति व्यक्तिगत वा शुद्ध घरायसी सामान किन्दा पनि बिल लिनुपर्ने कारणमाथि के छ त्यसको रहस्य ? आमउपभोक्ताले जान्न पाए सबैले बिल लिनैपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि ?
केही वर्ष पहिले मैले एउटा दोकानमा सामान किन्दा १५ हजार पुगेको थियो । अनाहकमा निहुँ खोजेर बिल माग्दा पसलेले भ्याट बिल दिए । सो बिल मैले मागेपश्चात् १३ प्रतिशत बढी रकम दिनुप¥यो । त्यहाँदेखि साहूजीसँग बिल नमाग्न कान समातेको मान्छेलाई यो बिलको कुरा गर्दा सातै जान्छ । सायद् भ्याटको १३ प्रतिशतले नआएको ज्वरो पनि आउँछ कि जस्तो लाग्छ ।